रंगहरू कसरी खरीद व्यवहार व्यवहार गर्छन्? | Martech Zone
बुधबार, सेप्टेम्बर 1, 2010 बिहीबार, मार्च ० 18, २०२० Douglas Karr
रंगहरूको विज्ञान मेरो विचारमा आकर्षक छ। उत्कृष्ट डिजाइनरहरू - चाहे तिनीहरू मोटर वाहन, घर सजाउने, ग्राफिक डिजाइनर, वा प्रयोगकर्ता इन्टरफेस विकासकर्ताहरूले र colors्गहरूको जटिलता र उनीहरूको महत्त्व बुझ्दछन्। बाट रंग प्यालेट सुनिश्चित गर्नका लागि चयन गरियो कि यसले सद्भाव प्रदान गर्दछ - वास्तविक र colors्गहरूको प्रयोगमा - प्रयोगकर्ता व्यवहारमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ।
र and र रंग प्यालेटहरूको बारेमा अधिक जान्नुहोस्
रंग ब्रान्ड मान्यता %०% ले वृद्धि गर्दछ, सीधा उपभोक्ता विश्वासमा अग्रणी। र American्गले अमेरिकी उपभोक्तालाई कसरी प्रभाव पार्छ भनेर यहाँ छ:
पहेलो - आशावादी र युवा, प्राय: विन्डो शपरहरूको ध्यान खिच्न प्रयोग गरियो।
लाल - ऊर्जावान, अत्यावश्यकता सिर्जना गर्दछ, मुटुको दर बढाउँदछ, र अक्सर क्लियरेन्स बिक्रीमा प्रयोग गरिन्छ।
ब्लू - भरोसा र सुरक्षाको संवेदना सिर्जना गर्दछ। गाढा र colorsहरू प्राय: बै banks्क र व्यवसायहरूसँग देखिन्छ (मेरो ब्रान्डहरू जस्तो)।
ग्रीन - धन संग सम्बन्धित। प्रोसेस गर्नको लागि आँखाका लागि सब भन्दा सजिलो रंग, त्यसैले यो स्टोरहरूमा आराम गर्न प्रयोग गरिन्छ।
सुन्तला - आक्रामक यो एक मजबूत कल-टु-एक्शन सदस्यता, खरीद, वा बेच्न को लागी सिर्जना गर्दछ।
गुलाबी - रोमान्टिक र स्त्री, महिला र जवान केटीहरु लाई उत्पादन बजार गर्न प्रयोग।
काले - शक्तिशाली र चिकना। लक्जरी उत्पादन बजार गर्न प्रयोग।
बैजनी - शान्त र शान्त गर्न प्रयोग गरिएको, अक्सर सुन्दरता र वृद्धावस्था विरोधी उत्पादनहरूमा देखा पर्दछ।
खुद्रा विक्रेताको लागि, किनमेल मनाउने कला हो। यद्यपि त्यहाँ धेरै कारकहरू छन् जसले प्रभाव पार्छ कसरी र कसरी उपभोक्ताहरूले खरीद गर्छन्। जहाँसम्म, एक ठूलो सम्झौता दृश्य संकेत द्वारा निर्णय गरिन्छ, सबैभन्दा बलियो र सबैभन्दा प्रेरणादायक रंग हो। जब नयाँ उत्पादनहरू मार्केटिंग गर्दा यो विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि उपभोक्ताहरूले दृश्य उपस्थिति र रंगलाई अन्य कारकहरू जस्तै आवाज, गन्ध र बनावटमा राख्छन्।
रंगले कसरी प्रयोगकर्ता छनौटहरू र खरीदहरूलाई असर गर्दछ?
यहाँ एक आकर्षक छ इंफोग्राफ़क रंगमा KISSmetrics बाट र खरीद निर्णयहरूमा यसको प्रभाव। अन्तर्दृष्टि केहि:
आवेग पसलहरू - अधिक रातो, सुन्तला, कालो, र शाही ब्लूजमा प्रतिक्रिया गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ। तपाईं यी रंगहरू फास्ट फूड, आउटलेट मालहरू, र क्लियरन्स बिक्रीमा देख्नुहुन्छ।
बजेट शपर्स - नेभि ब्लूज र टेलिसँग अन्तर्क्रियाको बढी सम्भावना हुन्छ, बैंक र ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा देखिएको।
परम्परागत खरीददारहरू - पिन्कहरू, स्काई ब्लूज, र गुलाब र colorsहरूसँग आकर्षित छन् कपडा स्टोरहरूमा।
इन्फोग्राफिक भित्र एक महत्त्वपूर्ण नोट यो हो कि विभिन्न संस्कृतिहरू र by्गद्वारा बिभिन्न किसिमले प्रभाव पार्छन्!
टैग: कालोनिलो हरियोखैरोरंगवाणिज्यइकमर्सतातोपानीसुन्तलाखरीद व्यवहारलालसही पहुँच
कर्पोरेट ब्लगि:: इन्फोग्राफिक
सेप्टेम्बर 17, 2010 मा 9: 40 AM
यो वास्तवमै चाखलाग्दो छ!
सेप्टेम्बर १,, २०११ 17::2010० अपराह्न
यो खोज अद्भुत छ ... म मेरो "बजेट" ग्राहकहरुका लागि चाँडै नै विशेष बिक्री चलाउने सोचमा थिएँ। र अब मलाई थाहा छ कुन रंगहरू प्रयोग गर्ने!
धन्यबाद! मेरो सम्बन्ध "राम्रो" म्यानि reg (तपाईलाई थाहा छ, जुन वास्तवमै QB हो!) 😉
नोभेम्बर २०, २००। 9::2011 अपराह्न
धेरै उपयोगी। म केवल त्यस बेला सोचिरहेको थिएँ जब मैले अर्को दिन किताब कभर बनाउँदै थिएँ। बाडेको मा धन्यवाद!
तपाईं शर्त, ग्रे!
नोभेम्बर २०, २००। 14::2011 अपराह्न
उत्कृष्ट पोष्ट डग्लस, तपाईंको inforographic एक महान संदर्भ उपकरण प्रदान गर्दछ। मलाई र colors्गको मनोविज्ञान र मार्केटिंगमा उनीहरूको प्रभाव मनपर्दछ। तपाईंको र colors्गको स्पष्टीकरणको माध्यमबाट जाँदा, प्रत्येकलाई समर्थन गर्ने तुरून्त उदाहरणहरू सम्झन यो गाह्रो हुँदैन।